Blogger of this week : Mahesh Sagar Khanal - MeroReport
Blogger of this week : Mahesh Sagar Khanal
अध्ययनको सिलसिलामा काठमाडौँमा बसोबास गर्ने महेश सागर खनालको पुरानो घर अर्घाँखाँची हो । भौतिक बिज्ञानमा रुची राख्ने महेश अहिले यसै बिषयमा मास्टर्स गरिरहेका छन । बिज्ञान दर्शन र राजनितीमा ब्लगिङ गर्न रुचाउने महेशले ब्लगिङ गर्न थालेको झन्डै तीन बर्ष भयो। समसामयिक कुराहरु र आफुलाई प्रभाव पार्ने कुराको बारेमा ब्लगिङ गर्न रुचाउने महेश यस साताका ब्लगर बन्न सफल भएका छन ।
सर्वप्रथम मेरोरिपोर्ट साताको ब्लगर बन्नु भएकोमा यहाँलाई बधाइ छ । साताको ब्लगर हुँदा यहाँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
सर्वप्रथम यो अवसर दिनुभएकोमा धन्यबाद । अत्यन्तै खुसी लागेको छ। साताको ब्लगर भएकोमा गर्ब लागेको छ।
कहिलेदेखि ब्लगिङ सुरु गर्नुभयो ?
मैले ब्लगिङ गर्न थालेको २००५ देखी हो। देशमा संकटकाल लागेको बेला केही ब्लगरहरुले ब्लगिङ गरेको खबरले मलाइ ब्लग लेख्न उत्प्रेरित गरेको थियो। तर त्यति बेला मेरो ब्लगिङ कपिपेष्ट ब्लगिङ थियो। आफैले ब्लग लेख्न थालेको तीन बर्ष जति भयो।
आफ्ना बिचार अभिव्यक्त गर्ने थुप्रै माध्यमहरु छन् । ब्लगिङ नै किन रोज्नु भयो ?
सिमा रहीत स्वतन्त्रता । अन्य माध्यममा जस्तो बाँधिनु नपर्ने र सामाजिक सञ्जालमा जस्तो खुम्चिनु नपर्ने भएर मैले ब्लगिङ रोजेको हुँ ।
के बिषयमा ब्लगिङ गर्न रुचाउनुहुन्छ ?
ठ्याक्कै यो बिषय भन्ने छैन आफुलाइ मनमा लागेका कुराहरु लेख्ने गर्छु। ब्लग बैचारिक अभिव्यक्ति पोख्ने ठाउँ हो भन्ने मेरो मान्यता हो त्यसैले कुनै बिषयमा बाँधिन चाहन्न तर पनि आफ्नो इच्छाको बिषय भएको कारण बिज्ञान दर्शन र राजनिती मेरो लेखनको बिषय हो ।
आफ्नो ब्लगमा के को बारेमा लेख्नु हुन्छ ?
बिज्ञान दर्शन र राजनिती | कहिलेकाहीँ कला संस्कृतिको बारेमा लेख्छु र आफ्नो जिल्लाको बारेमा लेख्छु। कुनै पुस्तक पढेर मन छोयो भने त्यसको बारेमा पनि लेख्छु |
आफ्नो ब्लगको बारेमा बिस्तृत रूपमा बताइदिनुस न ?
मेरो ब्लग विशुद्द मेरो आफ्नो भावना हो त्यसैले यसलाइ महेशको संसार mahesh's world नाम दिएको छु। आफुले देखेको र मनमा लागेको कुरो निर्धक्क लेख्ने गर्छु त्यसैले यो मेरो पुर्णतया ब्यक्तिगत अभिव्यक्तिको माध्यम हो ।
पछील्लो पटक के लेख्नुभयो ?
पछिल्लो पटक आफ्नै बारेमा लेखेको थिएँ। हुन त नेपाली खेल टोलीलाइ समर्थन गरेर एक दुइ पोष्ट लेखेको थिएँ तर त्यो भन्दा अघिको पोष्टलाइ जोड दिन चाहन्छु। पछिल्लो चरणमा मेरो राजनीतिक निस्क्रियतालाइ त्यसमा जनाएको छु।केही मित्रहरुले त्यसबारेमा निकै चासो दिएकोले ब्लगमार्फत प्रस्ट पार्न खोजेको हुँ।
तपाईंलाई आफ्नो ब्लगमा के कुराले लेख्न अभिप्रेरित गर्छ ?
आफ्नै भावना। यो कुरा लेख्छु भनेर कमै मात्र लेख्छु। समसामयिक कुराहरुर आफ्नो अध्य्यनको क्रममा आएको कुराले आफुलाइ कुनै प्रभाब पार्यो भने लेखिहाल्छु। त्यसरी लेखेका कुराहरुले सोँचेर लेखेका कुरा भन्दा राम्रो प्रतिक्रिया समेत पाएका छन ।
पछिल्लो समयमा अलिकम मात्रै पोष्ट गरेको छु। अहिले पुन सुचारु गर्दैछु। पहिले निकै राम्रो भिजिट थियो। अहिले बिस्तारै पहिलेकै अबस्थामा फर्कदै छ। प्रकाशित सामाग्रीमा राम्रै प्रतिक्रिया पाएको छु।
तपाईंलाई के लाग्छ ब्लगिङले समाजमा केही प्रभाव पार्न सक्छ ?
नेपालमा अझै पनि ब्लगिङ पुर्ण ब्लगिङ भए जस्तो लाग्दैन। ब्लगलाइ वेबसाइट ठान्नेको जमात ठुलै छ। तर पनि ब्लग चलाउने समुह देशको सचेत बर्ग नै हो। त्यसैले ब्लगमा ब्यक्त कुरा समाजको ऐना मान्न सकिन्छ। र समाज कता जादैछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। मेरा कतिपय बिदेशी पाठक समेत छन जसले नेपालको बारे बुझ्न मेरो ब्लग प्रयोग गर्छन। मलाइ थाहा छ मेरो ब्लग देशको आधिकारिक प्रतिनिधित्व नगर्ला तर पनि औसत नेपालीको भावना बुझ्न ब्लग उपयोगी हुन्छ ।
ब्लगिङ गर्दा त्यस्तो कुनै रमाइलो वा सम्झनलायक अनुभव छन भने बताइदिनुस न ?
मैले ब्लग सुरु गर्दा टेम्प्लेट डिजाइन गर्न समेत जानेको थिइन। एक जना साथीको डिजाइन देखेर सोध्दा बाह्र डलर लाग्छ भनेका थिए। पछि त्यो निशुल्क भएको थाहा पाएँ। त्यो मेरो ब्लगिङ यात्राको अबिस्मरणिय क्षण हो।र त्यो प्रेरणा पनि हो।
अहिले नेपालमा पनि ब्लगिङको ट्रेन्ड बढीरहेको छ ? यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाबले गर्दा नयाँ ब्लगर जन्मदै छन तर धेरै ब्लग समाचार पोर्टल मात्र बनेका छन। ब्लगिङ बुझेका कमै मात्र ब्लगर छन। धेरै ब्लगर कपिपेष्ट ब्लगर छन भन्दा फरक पर्दैन। तर पनि त्यस्ता ब्लगर धेरै टिक्दैनन। कि त हराउँछन कि त परिबर्तन हुन्छन। त्यसैले राम्रा ब्लगर समेत बढ्दै छन जुन सकारात्मक हो ।
तपाईंको बिचारमा नेपालमा ब्लग क्षेत्रको भविष्य कस्तो छ ?
नेपालमा ब्लगिङको भविष्य राम्रो छ। राम्रा ब्लगर आउँदैछन। सामाजिक सञ्जालको प्रभाबले गर्दा ब्लगको प्रचार पनि सहजै गर्न सकिन्छ जुन तीन चार बर्ष अघि सम्भब थिएन।
तपाईंलाई के लाग्छ, ब्लगिङमा आचारसंहिताको जरुरी छ?
ब्लग स्वतन्त्र लेखाइको माध्यम हो। त्यसमा लेखिएका कुरामा ब्लगर आफै जिम्मेबार हुनुपर्छ। तर यसमा आचारसंहिता आवश्यक छैन। यदि लेखिने कुरामा रोक नै लगाउने भए ब्लगको किन आवश्यकता पर्यो र?
नागरिक पत्रकारितालाई प्रवर्धन गर्नको लागि मेरोरिपोर्ट सुरु भएको छ । मेरोरिपोर्टको बारेमा तपाईंको के धारणा छ ?
मेरो रिपोर्टको सफलताको शुभकामना । पहिले पनि ब्लगलाई प्रबर्धन गर्न थुप्रै समुह बनेका थिए तर खासै प्रभावकारी देखिएनन। मेरोरिपोर्टले त्यो अभाव पुरा गरोस ।
ब्लगरहरुलाइ प्रोत्साहन गर्ने कदम प्रशंसनीय छ। राम्रा ब्लगरलाइ एक ठाउँमा ल्याउने पहल गर्नुहोला ।
महेशको ब्लग लिन्क : http://maheshsagar.blogspot.com/
Comment by Mahesh Sagar Khanal on March 23, 2012 at 2:18am
Comment by ramesh khatri on March 22, 2012 at 9:58pm
Comment by Indra Dhoj Kshetri on March 22, 2012 at 5:09pm
Comment by Jiwan Kshetry on March 22, 2012 at 3:50pm
Saathi congratulations. Keep up the spirit. Hope to see you regularly in Mero Report.
Comment by Ajeeta Sigdel on March 22, 2012 at 11:28am